Lianchuang Technology Group ayaa qabtay kulan wadajir ah rubuca saddexaad | Lianchuang
Mini Cool-bee Hawo qaboojiye
Lianchuang Technology Group ayaa qabtay kulan wadajir ah rubuca saddexaad
Subaxnimadii Oktoobar 13, Lianchuang Technology Group waxay shir wadajir ah ku qabteen rubuca saddexaad ee 2020 ee Lianchuang Academy. Gudoomiyaha Kooxda Lai Banlai, Agaasimayaasha Kooxda Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, Gudoomiyaha Kaaliyaha Lai Dingquan iyo hogaamiyeyaal kale, iyo sidoo kale hogaamiyeyaasha kala duwan ee kooxda Madaxda waaxyaha shaqada, madaxda shirkadaha warshadaha kala duwan, xubnaha Guddiga Maamulka Dhaqaalaha, iyo madaxda maaliyada iyo shaqaalaha ayaa ka soo qayb galay kulanka. Shirka waxaa hogaaminayey Chen Ye, Agaasime kooxeed iyo kaaliyaha gudoomiyaha.
Shirka, Liu Qinghui, oo ah ku-xigeenka agaasimaha guud ee shirkadda Liantek, Yao Li, oo ah ku-xigeenka maareeyaha guud ee Lianchuang Electric Appliance Industry Co., Ltd, Wen Hongjun, maareeyaha guud ee shirkadda Xinliangtian, Xu Jin, maareeyaha guud ee Lianchuang Electromechanical, iyo Ning Chuanjiu , maamule ku xigeenka Lianchuang Sanming, ayaa siday u kala horreeyaan u fuliyay hawlgallo saddexdii biloodba mar ah. warbixinta shaqada. Weriye kastaa wuxuu adeegsaday xog cad oo macquul ah, oo leh sawirro iyo qoraallo si habeysan u falanqeynaya una sharraxaya dib-u-eegista waxqabadka rubuca saddexaad, dhammaystirka shanta hawlood ee muhiimka ah ee sannadka, iyo meelaha dhalaalaya iyo kuwa madow ee ku jira rubuca saddexaad, iyo soo bandhig qorshaha afaraad ee afaraad ee ugu horeeya. Intaa ka dib, Chen Ye, oo ah agaasimaha kooxda isla markaana ah kaaliyaha guddoomiyaha, ayaa ku dhawaaqay ujeeddooyinka ganacsi ee ugu weyn ee laan kasta sannadka 2021, wuxuuna diyaariyey rubuca afaraad ee shaqaalaynta shaqaalaha ee shirkad kasta. Gudoomiyaha Kaaliyaha Lai Dingquan wuxuu sameeyay qabanqaabooyin iyo habeyn faahfaahsan oo ku saabsan shaqada kooxda ee miisaaniyada 2021
Intii uu socday kulanka, Wei Weicong, oo ah madaxa waaxda IT-da ee kooxda, wuxuu ka warbixiyay hirgelinta nidaamka macluumaadka kooxda iyo shirkad kasta sanadka 2020. Chen Jiandong, oo ah lataliyaha IT-da ee kooxda, wuxuu la wadaagay kiisas aad u wanaagsan oo xog-ogaal ah, wuxuuna soo jeediyay habab iyo habab lagu wanaajiyo maareynta ganacsiga iyadoo la kaashanayo nidaamyada macluumaadka. Hindise.
Guddoomiye Lai Banlai ayaa jeediyay khudbad gunaanad ah, isagoo ku nuuxnuuxsaday oo codsaday shaqo la xiriirta.
1. Sii wad hirgelinta iyo xoojinta dhismaha macluumaadka. Kooxdu waxay maalgashatay in kabadan 20 milyan yuan kahor iyo kadib. Shirkadaha oo dhami waa inay si firfircoon kor ugu qaadaan maareynta macluumaadka. Dhammaan dadka adeegsada nidaamyada macluumaadka, laga bilaabo heer-sare ilaa shaqaalaha caadiga ah, waa inay bixiyaan caddeyn shaqo; 2. Shirkad kasta iyada oo loo marayo "saddexda miis iibka", waxaan si qoto dheer u baari doonnaa fursadaha suuqa ee gobol kasta iyo wax soo saar kasta, oo waxaan ku ordi doonnaa si aan u dhammaystirno tilmaamayaasha ganacsi ee sannadlaha ah; qeybta seddexaad iyo afaraad, shirkad kastaa waxay diyaarin doontaa miisaaniyadda 2021 iyo shaqada muhiimka ah ee shaqaalaha; midda afraad, kooxdu waxay soo bandhigtay dhowr talanti oo waayeelnimo ah isla warshaddaas, qof walba waa inuu furaa maskaxdiisa, waxna ka bartaa, midba midka kale wax ka bartaa, horumar ka sameeyaa si wada jir ah, u hagaajiyaa waxqabadka shirkadda iyo faa'iidada, iyo inuu horumariyaa faa'iidooyinka shaqaalaha.
Ugu dambeyntiina, Lai Dong wuxuu qof walba ku dhiirrigeliyey: "Hore u soco oo faraxsan." Ku dhiirrigeli qof walba inuu wax u qabto si aad u daran oo wax ka sii fiican sameeyo, si ay ugu helaan qiimahooda u gaarka ah barxadda Lianchuang oo ay ku rumeeyaan riyadooda.
Ilaa hadda, shirkii seddexaad ee wadajirka ah ee Lianchuang Technology Group ayaa si guul leh ku soo gabagaboobay. Kulanku wuxuu diyaariyey hawlihii muhiimka ahaa ee rubuca afaraad waxaana lagu cadeeyey qorshaha istiraatiijiyadeed iyo yoolalka ganacsi ee sanadka 2021. Shirkaddu waxay kulankan u adeegsan doontaa fursad ay ku aqoonsato faa'iidooyinka, ka soo kabsato dhaliilaha jira, iyo inay sameyso dadaallada saxda ah ee ay ku ordi doonto rubuca afaraad. Ku dadaal inaad la dagaallanto ciyaarta xiritaanka 2020 oo aad aasaas adag u dhigto bilowga 2021!
Waqtiga boostada: Oct-16-2020